Duufaan sababtay dhimashada 22 Qof American ah oo ka dhacday Gobolka Alabama. – Shabakadda Amiirnuur
March 5, 2019 6:29 pm by admin Views: 30
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay duufaanno hor leh oo ku dhuftay wadanka Mareykanka ee dhaca waqooyiga qaaradda amerika. Wararka ka imaanaya gobolka Alabama ayaa sheegaya in tobanaan qof ay ku dhinteen duufaan si xwolli ah ku socota.
Wararku waxay sheegayaan in duufaantu ay xidda siibayso geedaha waaweyn taas oo sababtay in waddooyinku go’aan islamarkaana guryo badan ay burburaan. Xarumaha caafimaadka gobolka Alabaama waxaa ladhigay dad ka badan 40 qof oo dhammaantood ku dhaawacmay duufaanta, qaar kamid ah dhaawacyada dadka ayay xaaladoodu liidataa waxaana loo gudbiyay gobollada kale ee Mareykanka. Sanad walba duufaanno laayaan ah ayaa ku dhuftay gudaha wadanka mareykanka waxayna duufaanadaasi sababaan dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed.